- जनताले आवाज राख्ने ठाउँलाई निषेधित गर्नु लोकतन्त्र माथिको प्रहार होइन?
जनताले आवाज राख्ने ठाउँलाई निषेधित गर्नु लोकतन्त्र माथिको प्रहार होइन?
काठमाडौं: माइतीघर जनताको साझा स्थान हो जहाँ नेपाली जनताहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लडिरहेका छन् । सरकारसँग आफ्नो माग राख्ने थलो बन्दै गएको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित गर्नु कतिको उत्तम चाल हो ? यो त सिधै नागरिकमाथि लोकतन्त्र विरुद्धको प्रहार हो । नागरिकले आफ्नो बोलि राख्न पाउने अधिकारको सरासर हनन् हो । माइतीघर जहाँ विधार्थी, युवा तथा पिडितहरुले शान्ति सँग आफ्नो माग राख्दै आएका छन्, उक्त स्थानलाइ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु सिधै जनताको अधिकार माथिको प्रहार हो । की त सरकारले जनताको आवाज राख्ने वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नु पर्छ नत्र भने माइतीघरलाइ निषेधित गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ ।
। यहि माग राख्दै आज विधार्थीको भविष्यका लागि लडेका डा. गोविन्द केसी पुन सडकमा उत्रिएका छन् ।
निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार मध्याह्न १२ बजे डा केसी मुखमा टेप टाँसेर र हातमा दुई वटा प्लेकार्ड बोकेर सहयोगीसँगै माइतीघरमा पुगेका हुन्। डा केसीले बोकेको प्लेकार्डमा एउटामा ‘म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुँ’ र अर्कोमा ‘नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिँदैनौं। निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं’ लेखिएको थियो। केही समयको प्रदर्शनपछि उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनताले आवाज उठाउन पाउँछन्। माइतीघर जनताको साझा स्थान भएकाले यहाँ लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेको हुँ।’ उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लडिरहने बताए।